Ingabe Ibhizinisi Lakho Kufanele Libe Ku-Pinterest? | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 6, 2013 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Lesi sihlahla sesinqumo esivela ku-Zoom Creates Blogs siyithuluzi elihle lokuthi amabhizinisi anqume ukuthi anazo yini izinsiza noma cha futhi kufanele atshale isikhathi namandla ekwakheni Pinterest isu. I-infographic enhle futhi iyasebenza kakhulu. Uma ibhizinisi lakho linquma ukungalakhi isu lalo lePinterest, noma kunjalo, lokho akusho ukuthi awukwazi ukubuyisela emuva kumabhodi abanye abantu! Amanye amaklayenti ethu axhasa futhi asebenze nabaqhubi bebhodi lePinterest abaphumelelayo ukwabelana ngolwazi futhi kusebenza okuhle.
Njenganoma iyiphi ingosi yezokuxhumana, kubalulekile ukuzifundisa endaweni yesikhulumi, ufunde ukuthi yini ehilelekile ekubeni yilungu elikhuthele ngempela nokuthi kungathatha isikhathi esingakanani ukugcina iphrofayili yakho. Akuwona wonke amabhizinisi alungele iPinterest. Udinga ukuthola ukuthi ukunikela kwakho namakhono akho ayahambisana yini nesayithi bese wakha isu eliqinile ngaphambi kokweqa. Ukujoyina noma iyiphi indawo yezokuxhumana kuthatha isikhathi, umzamo futhi, esimweni sePinterest, izithombe ezesabekayo nokuqukethwe okuhle. Ngakho-ke, ingabe ibhizinisi lakho selikulungele ukuzibophezela?
I-Zoom Idala Amabhulogi ubuza futhi anikeze imininingwane yezimpendulo zemibuzo emine ebalulekile lapho uthatha isinqumo sokuthi ibhizinisi lakho kufanele litshale imali ebukhoneni bePinterest noma cha?
Ungahlala usebenza ku-Pinterest?
Ingabe unezithombe ezihehayo, noma ungazidala?
Ingabe izithameli zakho ezihlosiwe zisebenzisa iPinterest?
Ngabe unokwabelana okuningi kunalokho okwenzayo nje?
Uma uthatha isinqumo sokuqhubekela phambili, ngincoma kakhulu UKaren LelandIncwadi Umhlahlandlela Wokugcina wePinterest Wezebhizinisi. UKaren usithumelele ikhophi futhi - yebo - leso isixhumanisi sethu sokusebenzisana.
Tags: PinterestUkumaketha kwePinterestisu le-pinterest
Izinyathelo Eziyi-10 Zokuya Kwinsizakalo Yemakhasimende Ekhanyayo
Aug 6, 2013 ku-10: 46 AM
Siyabonga kakhulu ngokufunda okuthunyelwe kwethu "Uma ngabe Ibhizinisi Lakho Libe KuPinterest" futhi sabelane nge-infographic nabafundi bakho.
Aug 16, 2013 ku-10: 37 AM
Sawubona. Ngiwafaka kanjani amathiphu nezinto ezishukumisayo ku-Pinterest uma ngingenaso isikhathi / ikhono lokuqhafaza lokwenza ama-infographcs?
Aug 16, 2013 ku-11: 47 AM
I-infographics empeleni iyisiqeshana sokuthandwa kukaPinterest…. izithombe zigqame ukwedlula noma yini. Qalisa ukusebenzisa isayithi elifana nezithombe zeDepho ukuthola ezinye zehluzo ezinhle ezingabizi - http://www.depositphotos.com (umxhasi wethu) - bese unamathisela amathiphu akho noma izinto ezishukumisayo ngesizinda esihle!
Aug 17, 2013 ku-8: 12 AM
Njengoba angizange ngiguqule noma yimuphi wabalandeli bami bePinterest waba amaklayenti (ngokwazi kwami) anginqeni ukusebenzisa imali kulokhu. Kepha nakanjani ngizosithatha lesi seluleko esicatshangelwayo. Ngiyabonga.
Aug 17, 2013 ku-9: 28 AM
Vele, kungakuhle kakhulu ukuthola leso sixhumanisi esiqondile ekuguqulweni. Kwesinye isikhathi lokhu kuzivocavoca kumayelana nokwenza uphawu lwegunya namandla, noma kunjalo. Abantu abaningi abanokulandela okukhulu ku-Pinterest babonwa njengabaholi bemboni nezinsizakusebenza ezethembekile - okuthile okufanele kugcinwe engqondweni. Ukuphina okuhle! 🙂